LED Glass Door Vagadziri uye Suppliers - Wholesale LED Glass Door Suppliers
Yakarurama Freezer / Inotonhorera Girazi Door
Famba-muFreezer/Cooler Glass Door
Chest Freezer Girazi Door
Waini Cabinet Girazi Door
LED Girazi Door
Tsika Mufananidzo Digital Printing Frameless Glass Door...
YB LED Girazi Door iri kushandisa yakakwidziridzwa inoyangarara yakadzikama Low-E girazi, inorwisa-kudhumhana, inoputika-inoratidza kuomarara kwemotikari windshield. Kazhinji gonhi regirazi rinopenya kaviri iro rakazadza neArgon, Krypton inosarudzika. Triple glazing ndeyekushandisa firiza, kupisa basa kunosarudzika. YB LED Girazi Door inogona kusangana nezvinodiwa tembiricha kubva 0 ℃-10 ℃, iyo gasket ine yakasimba magineti inogona kudzivirira kutonhora kwemhepo kuvuza uye kuwedzera simba-kushanda. Frame inogona kuva PVC, aruminiyamu alloy, simbi isina tsvina ine chero ruvara rwaunoda kusangana nemusika wako wekuda kana kuravira. Recessed, Add-on, Yakazara refu kana customized mubato anogona zvakare aesthetic poindi.
LED Chiedza Girazi Door
YB LED Mwenje Girazi Door iri kushandisa yakakwidziridzwa inoyangarara yakadzikama Low-E girazi, inova anti-kudhumhana, inoputika-chiratidzo nekuoma kwemotokari mhepo. Kazhinji gonhi regirazi rinopenya kaviri iro rakazadza neArgon, Krypton inosarudzika. Triple glazing ndeyekushandisa firiza, kupisa basa kunosarudzika. YB LED Chiedza Girazi Door inogona kusangana nezvinodiwa tembiricha kubva 0 ℃-10 ℃, iyo gasket ine yakasimba magineti inogona kudzivirira kutonhora kwemhepo kuvuza uye kuwedzera simba-kushanda. Frame inogona kuva PVC, aruminiyamu alloy, simbi isina tsvina ine chero ruvara rwaunoda kusangana nemusika wako wekuda kana kuravira. Recessed, Add-on, Yakazara refu kana customized mubato anogona zvakare aesthetic poindi.
Snow logo LED Girazi Door
YB Snow logo LED Girazi Door iri kushandisa yakakwidziridzwa inoyangarara yakadzikama Low-E girazi, inodzivirira kudhumhana, inoputika-inoratidza kuomarara kwemotokari mhepo. Kazhinji gonhi regirazi rinopenya kaviri iro rakazadza neArgon, Krypton inosarudzika. Triple glazing ndeyekushandisa firiza, kupisa basa kunosarudzika. YB Snow logo LED Girazi Door inogona kusangana nezvinodiwa tembiricha kubva 0 ℃-10 ℃, iyo gasket ine yakasimba magineti inogona kudzivirira kutonhora kwemhepo kuvuza uye kuwedzera simba-kushanda. Frame inogona kuva PVC, aruminiyamu alloy, simbi isina tsvina ine chero ruvara rwaunoda kusangana nemusika wako wekuda kana kuravira. Recessed, Add-on, Yakazara refu kana customized mubato anogona zvakare aesthetic poindi.